अनेक च्यालेन्ज भन्दै फेसबुकमा यति ठूलो गल्ती त गर्नुभएन, नभुल्नुहोस् सबै बर्बाद हुनसक्छ:: Naya Nepal
बीर बहादुर वली । भारतका चर्चित उद्योगपति मुकेश अम्बानीले एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘यो नयाँ संसारमा डाटा नयाँ सम्पत्ति हो ।’ अहिलेको समयमा जो सँग डाटा छ उ नै सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ । मैले आज यो कुरा किन गर्न खोजेको हुँ भने नेपालमा पछिल्लो समय फेसबुक, ट्विटर लगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा धेरै व्यक्तिहरूले आफ्ना र परिवारका तस्बिरहरु धमाधम पोस्ट गरिरहेका छन् ।
अब विश्वमा पाचौं पुस्ता अर्थात फाइभ–जी यु–द्ध हात ह–तिया–रको होईन डिजिटल यु–द्ध हुन्छ । अहिलेको समयमा जोसँग डाटा छ उ नै सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ । अमेरिकालगायत हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि हालै चिनियाँ एपहरू बन्द गरिएको उदाहरण हामीले भुलेका छैनौं । चीनमाथि अरु देशका जनताको डाटा सङ्कलन गरिरहेको अथवा चोरी गरेको भन्ने आरोप पटकपटक लाग्ने गर्छ । सर्वाधिक प्रयोगकर्ता भएको फेसबुकमाथि पनि यस खालका आरोपहरु योभन्दा पहिले लागिसकेका छन् ।
फेसबुक आफै पनि अनावश्यक लिङ्कहरु मा क्लिक नगर्न भनेर अनुरोध गरिरहेको हुन्छ । फेसबुक प्रयोग गर्दा खेरि पनि सावधान रहन भनेर फेसबुकले पटक–पटक आफ्ना प्रयोगकर्ताहरुलाई अनुरोध गरिरहेको छ । सामान्यतया विभिन्न एपहरु प्रयोग गर्दा अनुमति दिने गरेका कारण डाटा चोरी हुने समस्या गम्भीर हुँदै गएको छ । त्यसकारण अनावश्यक एपहरु प्रयोग नगर्न र विनाकारण अनुमति प्रदान नगर्न फेसबुक अनुरोध गर्छ ।
अहिले पनि विभिन्न च्यालेन्जका नाममा आफ्ना श्रीमती छोराछोरी भाइ–बहिनी आमाबुबा लगायत विभिन्न व्यक्तिहरूको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक रुपमा पोस्ट गर्ने क्रम बढेको छ । क्षणिक रमाइलोको लागि गर्नु भएको यो कुरा तपाँईको भविष्यका लागि र देशका लागि कत्तिसम्म खत्तरानाक हुनसक्छ त्यो कुरा सायदै सोच्नु भएको होला । तपाईंले दीर्घकालीन रुपमा सोच्नुभयो भने यसले वास्तवमा देश र तपाईंका लागि असुरक्षित महसुस गराउँछ । उसैपनि फेसबुक एकजनाले चलाउने हो तपाई चलाउनुहुन्छ तपाईंले आफ्नो विवरणहरु राख्न सक्नुहुन्छ किनभने फेसबुकमा सबै मान्छे एकै हुँदैनन् ।
तपाईंले भने कैँ मान्छे आउँछन् भन्ने हुँदैन तपाइको फेसबुक जो सुकैले पनि हेर्न सक्छ तपाईका छरछिमेकीले पनि हेर्न सक्छन् । नेपालमा पनि यस्ता धेरै घटनाहरु भएका छन् फेसबुकबाट धेरै पहिले हामी कतै बाहिर जाँदैछौं भनेर घरबाट निस्कदै गरेको तस्बिर एक परिवारले पोस्ट गर्छ अनी केही समयपछि त्यो घरमा चोरीलगायत अन्य कामहरु हुन्छन् । यसरी पूर्वसुचना दिने गर्नाले गर्दा बीचबाटोमा लु–टपा–ट, ज्या–न लिने लगायतका घटनाहरु पनि नभएका होईनन् । अहिलेको समयमा एउटा गतिलो ह–तिया–रका रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भइरहेको छ यसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
तपाईले आफ्ना व्यक्तिगत तस्बिरहरु आफ्ना परिवारका तस्वीरहरु आफ्ना व्यक्तिगत विवरणहरु कहाँ बस्नुभयो कहाँबाट आउनुभयो लगायत अनावश्यक कुराहरु जुन तरिकाले फेसबुक वा जुनसुकै पनि सामाजिक सञ्जालमा राख्नु हुन्छ त्यसले तपाइँलाइ कुनै फाइदा पुर्याउदैन । अर्कोतिर तपाइले मोबाइलमा लोकेशन अन गर्ने गर्नुभएको छ भने पनि त्यसले पनि तपाई असुरक्षित भएको कुरा महसुस हुन्छ । आज तपाईं विश्वमा देख्न सक्नुहुन्छ चीन र अमेरिका बीचको ल–डाई किन भइरहेको छ ?
सबैलाई थाहाँ छ कि यी दुई देशहरु डाटाका विषयलाई लिएर एक आपसमा लडिरहेका छन् । अमेरिकाले चीनमाथि लगातार आरोप लगाइरहेको छ कि उसले विज्ञान र प्रविधिको गलत प्रयोग गरेर जनताका डाटाहरु सुरक्षित गरिरहेको छ । केही दिन पहिला मात्र खबर आएको थियो भारतका दश हजारभन्दा धेरै भिभिआइपी हरूको डाटालाई चीनसँग छ । सामाजिक सञ्जालमा समयसमयमा १० वर्षे च्यालेन्ज लगायतका विभिन्न च्यालेन्जहरु केही समयका लागि आउँछन् अनी हराउँछन् ।
धेरै अध्ययनहरुका अनुसार यसका पछाडि कुनै एजेन्सीहरुको हात रहेको हुन्छ । नत्र भने किन कुनै टे«न्ड सुरु भएपछि समाप्त भएर फेरि अर्को सुरु हुन्छ ? मानिसहरु तपाईँको डाटा सङ्कलन गर्न चाहन्छन् तपाईंको परिवारमा को को छ ? तपाईं कस्तो प्रकृतिको मान्छे हुनुहुन्छ ? तपाईंले लेख्ने स्टाटस हरु कस्ता छन् ? तपाईंले राख्ने फोटोहरुका आधारमा हेर्ने गरिन्छ । तपाईंलाई धेरै कुराहरुबाट मुल्यांकन गर्न सकिन्छ । अहिले बालबालिकाको जस्तो व्यवहार कतिपयले गरिरहेको देख्दा अत्यन्तै दुःख लागेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहँदा यो सबैलाई बताउनु जरुरी छैन कि तपाईंको परिवारमा को–को हुनुहुन्छ ? तपाईंको छोराछोरी कति छन् ः तपाईंको श्रीमती, तपाईंको घर, तपाईंको गाउँ सबै कुराहरु तपाईले फेसबुकमा राख्नुपर्छ भनेर कतै पनि लेखेको हुँदैन । फेसबुक तपाईं आफूले मात्रै चलाउनुस्, जब तपाँई आफ्नो फेसबुकमा मैँले माथि उल्लेख गरेका कुराहरु ल्याउन थाल्नुहुन्छ त्यो समयदेखि नै तपाँई असुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट भए पनि हुन्छ । जथाभाबी एप्सहरु डाउनलोड गरेर त्यसमा तपाईँको डाटाहरु पठाउनु पनि गम्भीर गल्ती हुन्छ ।
तपाईंले हरु सबैलाई जानकारी होला, भारतले चीनका सयभन्दा धेरै एपहरु हालै बन्द गरिसकेको छ । चीनसँग सरोकार भएका विभिन्न चर्चित एपहरुमाथि भारतले प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ । अमेरिकामा पनि लगाउने तयारी हुँदैछ । किनभने चीनले त्यसबाट डाटा सङ्कलन गरिरहेको छ वा चोरी गरिरहेको छ । टिकटकले गलत तरिकाले चीन सरकारलाई अर्को देशका प्रयोगकर्ताहरूको अथवा जनाताको डाटा चोरी गरेको आरोप लागेकै कारण भारतमा टिकटक बन्द भएको हो ।
बीर बहादुर वली
अर्को रोचक कुरा तपाईहरुलाई बताउँछु । किन आज चीनमा फेसबुक चल्दैन, उत्तरकोरियामा चल्दैन ? केही कारण त पक्कै होला नत्र चीनजस्तो १ अर्ब ४० करोड भन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश चीनमा कम्पनीहरु जान नचाहेका त पक्कै होईनन् । तर फेसबुक, ट्वीटर, युट्यब, गुगललगायत विश्वभर चर्चामा रहेका कुनै पनि कम्पनीको सेवा चीनमा किन बन्द छ ? यो त सोच्नुपर्ने विषय होईन र ? यसका पछाडि पनि डाटाको ठुलो महत्व रहेको छ । चीन आफ्ना नागरिकहरुको डाटा विदेशीलाई दिन चाहँदैन् । डाटा चोरी हुँदा के हुनसक्छ भनेर एक कारणका बारेमा एक उदाहारण राख्नेछु ।
आज चीनले आफ्नै फेसबुक, ट्वीटर, युट्यब, गुगललगायत सबै आवश्यक प्रविधिको विकास गरेको छ । आज चीनका हरेक जनताको डाटा त्यहाँको सरकारसँग सुरक्षित हुन्छ । अरु देशहरुसँग पनि चीनको बाटोमा छन् तर यो कुरामा चीन अरु देशहरुमा धेरै अगाडि रहेको छ । अमेरिकामा बनेका फेसबुक, ट्वीटर, युट्यब, गुगललगायत हुन् वा चीनमा बनेको टिकटकलगायत एपहरु हुन यी सबैको काम हाम्रो डाटा चोरी गर्नु नै हुन्छ । अमेरिकाको सामाजिक सञ्जाल चीनमा प्रयोग गर्न पाइँदैन किन ? आफ्ना नागरिकहरुको गोप्य सुचना अमेरिका सम्म पुग्ने डर चीन सरकारलाई पहिलेदेखि थियो । भारतले पनि सावधानी अपनाउँदैछ ।
हामी अहिले २१औँ शताब्दीमा बाँचेका छौँ । अहिले विश्व फइभ–जी वा पाँचौं पुस्ताभन्दा माथि पुगिसक्यो । सिक्स–जी अर्थात छैटौँ पुस्ताको इन्टरनेटको विकास हुँदैछ । चीन विश्वमा आफ्नो हुवाबे कम्पनीको फाइभ–जी प्रविधि विस्तार गर्न चाहान्छ तर भारत, बेलायतलगायत देशहरुले बन्देज लगाउँन खोज्दैछन् । चिनियाँ कम्पनीहरुलाई काम गर्न दिइएको छैन किनभने हरेक देशले आफ्नो डाटा सुरक्षित राख्न चाहन्छ । यसबारेमा तपाइँ हामी सबै सचेत हुनुपर्छ । च्यालेन्जका नाममा हुने यस्ता अनावश्यक कुराहरुलाई हामीले हल्का रुपमा लिनुहुँदैन गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।
हामी सबैलाई साबधान हुनुहोस भनेर अनुरोध मात्रै गर्छौ, बाँकी तपाँईको हातमा छ । विगतमा १० वर्षे च्यालेन्जलाई तपाईले हेर्नुभएको थियो भने त्यो पनि निकै चर्चित भएको थियो । १० वर्ष पहिले तपाई कस्तो हुनुहुन्थ्यो ? वा १० वर्षपछि तपाँई कस्तो देखिनुहुन्छ ? लगायतका धेरै कुराहरु तपाँईले हेर्नुभएको थियो । हामीले प्रयोग गर्ने इन्टरनेटमा अनेक कुराहरु उपलब्ध हुन्छन् । त्यस्ता धेरै वेबसाइट हरु हुन्छन जुन कानुनीरुपमा मान्यता प्राप्त हुँदैनन् । यदि कानुन कानुनीरुपमा मान्यता प्राप्त भएपनि त्यसमा कसैले केही गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन ।
आज विश्वमा धेरै नाम चलेका यस्ता जासुस संस्थाहरु छन्, जसको काम आफ्नो विपक्षी देशमा असन्तुलन कायम गर्नु भन्ने हुन्छ । सरकार परिवर्तनदेखि लिएर अनेक कुराहरु सामाजिक सञ्जालको बलमा सम्भव हुनसक्छ । अमेरिकामा सिआइए छ, पाकिस्तानमा आईएसआई छ, इजरायलमा मुशाद छ, भारतमा रअ रहेको छ । यी एजेन्सीहरु हरेक देशको जनताको डाटाका आधारमा उक्त देशमा के–के गर्न सकिन्छ भनेर योजना निर्माण गर्न सक्छन् । यदी सामाजिक सञ्जालमा जातिय कुराहरु आइरहेको छ भने उनीहरुको काम त्यसमा तेल थप्ने हो ।
धार्मिक आधारमा मानिसहरु लड्दैछन् भने त्यहाँ पनि पुगेर इट्टा थप्ने काम यी एजेन्सीहरु गर्न सक्छन् । यो बाहेक ठुलठुला व्यक्तिहरुको ज्यान लिनका लागि पनि त्यो देशका जनताको मुड पहिले चेक गर्ने गरिन्छ । अहिलेको समयमा आइटीसेल कुनै आ–तंकवादी संस्था भन्दा कम हुँदैन । यी बाहेक अन्य कुराहरु पनि हुन्छन् । हरेक देशका जनताको डाटा संकलन गरेर त्यो अनुसारको परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्ने गरिन्छ ।